Ukuqonda ukuba ukuHlawula ngokuCofa ngokuNceda njani ukuKhangela okuPheleleyo | Martech Zone
NgoLwesine, uJanuwari 22, 2015 NgoMgqibelo, uJanuwari 14, 2017 Douglas Karr
Iyaqhutywa kuwe yonke imihla ngokuthengisa i-gurus… awudingi ukuhlawulela unqakrazo. Yiba yintsusa, bhala umxholo omkhulu, wabelane ngeendaba zosasazo- kwaye ngomlingo intengiso iza kuza ibetha emnyango. Okanye baya kuthi? Ndiyaqhubeka nokushumayela kubaphulaphuli bethu ukuba ayisoze ibe yinto enye ngaphezulu kwenye, yindlela abanokondla ngayo okanye balandelane. Kwindaba ye UkuSebenza kweeNjini zoPhando Ukuqobisana Yoshishino LwezoKhenketho kunye nokuHlawula ngokuCofa, kukho ukusebenzisana okumangalisayo ekusebenziseni zombini.
I-podcast yethu elandelayo ivuliwe Umda weRadiyo yeWebhu izakuxoxa ngesi sihloko kunye nezinye izizathu ezenza ukuba inkampani yakho ityale imali kwiPey nganye ngokucofa.
Ukuguqula amagama aphambili -Ukuba uqala indlela yokubhala umxholo ukuze ubekwe kwinqanaba, uza kubhala ngantoni? Ngawaphi amagama aphambili aya kuguqula uninzi lwezithuthi? Iinkampani ezininzi kakhulu azinalwazi… zenza uphando kwishishini labo nakwabo bakhuphisana nabo kwaye beza noluhlu. Ke iinyanga basebenzise iitoni zoncedo ukuze babekwe kwinqanaba kuloo miqathango. Mhlawumbi bayahlelwa… kuphela ukufumanisa ukuba akukho mntu uguqukayo kwindawo yabo. Endaweni yokutyala ixesha kunye namandla kwimixholo kunye nophendlo olwenziweyo, ngebebesebenzise imali encinci ekuhlawuleni ngokonqakrazo olunye kwaye bavavanya indibaniselwano yamagama aphambili ukubona ukuba yeyiphi eguqula eyona ilungileyo. Nje ukuba wazi ukuba yintoni eguqukayo, emva koko ungabhala, wabelane, kwaye ukhuthaze umxholo malunga nesihloko ukuphucula umgangatho wakho wokukhangela kunye nokunciphisa iindleko zakho ngokuhombisa.
I-SERP yokuThengiswa kweNdawo Ukhe wakhangela imveliso enkulu okanye uphawu kwaye wothuka kukubona ukuba bahlawule iintengiso kwimveliso yabo okanye igama lophawu? Kukho izizathu ezibini zoku… eyokuqala kukuba abo bakhuphisana nabo bangabhidi kwezi ziphumo. Kodwa esona sizathu sokunyanzelwa kukuba ungalonyusa kakhulu inani lokucofa kwiPhepha leZiphumo zeNjini yokuKhangela (SERP) nokuba ukwisikhundla esiphakamileyo! Xa ubeka kuqala, unganyusa unqakrazo ngereyithi (CTR) ngama-50%, intengiso ye-PPC ecaleni kwenqanaba ukusuka ku-2 kuye ku-4 inokunyusa i-CTR ngama-82%, kwaye ngokwamanqanaba angaphantsi kwe-5 i-CTR iya kunyusa i-96% ngokomyinge. !
Ukusuka kwi-Injini yoMhlaba woKhangelo- Uphando lukaGoogle: Nokuba ukwiNqanaba le- # 1 le-Organic, iiNtengiso eziHlawulwayo zibonelela nge-50% yokunyuka konqakrazo:
IiRhafu zokuTshintsha -Emva kokucofa komsebenzisi kwi-SERP kwaye ufike kwindawo yakho, ungafumanisa ukuba, ngaphandle kwendlela ethe ngqo, ukugcwala okukhokhelwayo okuhlawulelweyo kunexabiso eliphezulu kunye neyona migangatho inkulu yokuguqula. Oko kubaluleke kakhulu kwaye kufuneka usethe kubahlalutyi ngokufanelekileyo kwaye ulandelele umkhankaso wakho ngamnye ngononophelo. Ithiyori emva koku ilula- xa abasebenzisi beenjini yokukhangela bekulungele ukuguqula, bayaxhuma kwi-SERP kwaye bacofa kwiziphumo eziphezulu.
Ukumaketha kwakhona Olunye uncedo olukhulu lokuba i-PPC inesicwangciso-qhinga sakho se-SEO luncedo lokumaketha kwakhona. Ukumaketha kwakhona iithagethi kwintengiso kubantu esele betyelele indawo yakho (kodwa khange bathenge) ngokuthumela imiyalezo elungiselelwe okanye izibonelelo ezizodwa. Nge-Google Adwords, umzekelo, unokuvelisa imikhankaso yokukhangela kunye nakwiindawo zangaphandle eziza kubonisa intengiso yakho emva kokuba undwendwe lufikile kwindawo yakho emva koko lishiye. Ndiyoyika ukuba awungekhe ulandele umntu onje ngophando lwe-organic ke kuyanceda kakhulu.
Sukugxotha ukukhangela okuhlawulelweyo. Njengoko izicwangciso zomxholo ziye zenyuka zathandwa, ukhuphiswano luyoyikeka-lufuna uhlahlo-lwabiwo mali lokwazisa ukwenza umahluko. Ndingakukhuthaza ukuba uqeshe ingcali (kungenjalo uhlahlo-lwabiwo mali lwakho luya kutyiwa kwinqanaba elingaphaya kokuqonda!). Vavanya iitoni zendibaniselwano, sebenzisa ezona ndlela zilungileyo, sukela amagama aphambili aguqukayo kunye nezicwangciso zezinto eziphilayo zokuqhuba iindleko zokhokelo ngalunye, kwaye uguqule uninzi lube yinkampani yakho. Ukuhlawula ngonqakrazo ngalunye ngumhlobo osenyongweni.
tags: izinga lokuguqulwaukuguqula amagama aphambiliemaphethelweni erediyo yewebhuUkuguqulwa kwamagama aphambilieziphilayouphando lwezinto eziphilayoHlawula ngokucofa kanyePPCukumakethainjini yokukhangela umhlabainyokainyoka ctrserp izindlu nomhlaba
Uku-odola izitikha zesiko kwimizuzu emi-2 ngeMeyile yesitikha